Rayson eRayson Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Imikhiqizo eyinhloko Best izinhlangothi Double ukusetshenziswa entwasahlobo kumatilasi FactoryPrice-Rayson
Lo mkhiqizo akuyona nje into okufanele ibekwe esikhaleni kepha empeleni sigcwalisa isikhala. - Kusho elinye lamakhasimende ethu.
Indawo Yokudabuka: I-Guangdong, China (ezwekazini)
Umkhiqizo: URayson, i-OEM
Ukuqina: Ithambile / Maphakathi / Kunzima
Igama lokuhweba: I-EXW, i-FOB, i-CIF, umnyango nomnyango
Uhlobo lwenkampani: Ifektri, Ukwenziwa
Indwangu: Indwangu eboshwe
Isicelo: Ikhaya, ihhotela, ifulethi
Isikhathi sokukhokha: TT / LC, 30% IDIPHOZINI EYOKHOKHELWA NGAPHAMBI KOKUKHIQIZWA, 70% UKULINGANISELA AMAQOPHANA WEMIBHALO YOKUTHUNYELWA NGAPHAKATHI KWEZINSUKU EZI-7 ZOKUSEBENZA
Silandela ngokuqinile izinqubo ezijwayelekile zokulawula ikhwalithi ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo yethu ihlangabezana noma yeqa okulindelwe ngamakhasimende ethu. Ngaphezu kwalokho, sinikezela ngezinsizakalo zokuthengisa ngemuva kwamakhasimende emhlabeni wonke. Ngemuva kweminyaka yentuthuko, sisungule ubudlelwano bokubambisana besikhathi eside namakhasimende ethu emhlabeni jikelele. Sicela uqiniseke ukuthi sinelungelo lokuthekelisa imikhiqizo yethu futhi ngeke kube khona umonakalo owenzekile empahleni ehanjisiwe. Samukela ngobuqotho uphenyo lwakho futhi ushayele. Ngemigqa ephelele yokukhiqiza nabasebenzi abanolwazi, uRayson angaklama ngokuzimela, athuthukise, akhiqize, futhi avivinye yonke imikhiqizo ngendlela ephumelelayo.
Omatilasi bakho kufanele bahlale isikhathi esingakanani? Njalo umatilasi wehlukile. Uma uphonsa ebusuku noma uvuka ubuhlungu sekuyisikhathi sokuthola umatilasi omusha kungakhathalekile ukuthi uneminyaka emingaki. Sincoma ukuthi uhlole umaki womthetho bese ushintsha okungenani njalo eminyakeni eyisishiyagalombili. Yiziphi izindlela zokukhokha ozamukelayo? I-LC ngokubona / nge-TT, i-30% yeDeposi ne-70% esele iphikisana namakhophi wemibhalo yokuthumela i-witinin izinsuku zokusebenza eziyi-7. Ungakhipha kanjani umatilasi ogoqiwe? 1.Beka ikhathoni endaweni eyisicaba egumbini lakho lokulala, donsela umatilasi ngokucophelela bese ubeka embhedeni wakho. 2. Sika ngokucophelela isikhwama sangaphandle ngesikele uqiniseke ukuthi awusiki ipulasitiki embi ngaphakathi noma kumatilasi, ungammangaleli ummese. 3. Khipha umatilasi ovaliwe ongenalutho ungene embhedeni wakho 4. Sika ngokucophelela isikhwama sepulasitiki eceleni kwewashi njengoba umatilasi eqala ukuwohloka ngokushesha, Susa isikhwama sepulasitiki. 5.Vumela amahora angama-24 ukuthi omatilasi bakho abasha banwebe ngokugcwele.
1.Flat onomfutho nge Pallet ngokhuni
2.Roll up nge ibhokisi noma okwakhiwa iphepha